နိုင်ငံ တကာ က မိန်းကလေးပရိ သတ်တွေ ပိုင်တံခွန်ကို သည်းသည်းလှုပ်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ မနာလိုချင်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ် အချို့ကိုချပြလာတဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း - Myannewsmedia
အနုပညာလောကရဲ့ အခြောအလှညီအဈမတှဖွေဈကွတဲ့ နှငျးဝတျရညျသောငျး၊ အေးဝတျရ ညျသောငျးနဲ့ ဆှိဝတျရညျသောငျးတို့ ညီအဈမကတော့ တဈယောကျကိုတဈခတျေဆိုသလို အနုပညာလောကကို လှမျးမိုးနို ငျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ နှငျးဝတျရညျသောငျးက နိုငျငံရပျခွားမှာ အခွခေနြထေိုငျနတောမို့ အနုပညာအလုပျတှနေဲ့ အလှမျးဝေး သှားခဲ့ပွီဖွဈပွီး အေးဝတျရညျသောငျးနဲ့ ဆှိဝတျရညျသောငျးတို့ကတော့ ရနျကုနျမှာနထေိုငျပွီး အနုပညာ အလုပျတှကေို အရငျအတိုငျး ဆကျလကျလုပျကိုငျနကွေဆဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာတော့ ဆှိဝတျရညျသောငျးက နိုငျငံတကာက မိနျးကလေးပရိသတျတှေ ပိုငျတံခှနျကို စိတျဝငျ စားနကွေတဲ့အခြိနျမှာ မနာလိုခငျြစရာကောငျးတဲ့ ပုံရိပျအခြို့ကိုခပြွလာပါတယျ။ ဆှိဝတျရ ညျသောငျးက “ကယျရော့! ကိုကွီးတံခှနျနဲ့ maldives ခရီးစဉျအမှတျတရ (အရှတေ့ောငျ အာရှက မမမြားမ နာလိုဖွဈကွကုနျ 😜 😜😜 )” ဆိုပွီး မျောဒိုကျခရီးစဉျမှာ ပိုငျတံခှနျနဲ့ ရစေိ မျနကွေတဲ့ အမှတျတရ ဓာတျပုံတှကေို သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ခပြွလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဆှိဝတျရညျသောငျး၊ အေးဝတျရညျသောငျး၊ ပိုငျဖွိုးသု၊ ပိုငျတံခှနျ၊ ကြျောထကျဇျောစတဲ့ အနုပညာရှငျတှကေ ပွီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနှဈက မျောဒိုကျခရီးစဉျကို အတူတကှသှားခဲ့ကွတာဖွဈပွီး ဆှိဝတျရညျေ သာငျးကတော့ သူမတို့ ခရီးစဉျက အမှတျတရအခြို့ကို စနောကျပွီးပွော လာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ဆှိဝတျရညျသောငျးပွောသလိုပဲ အမှနျ တကယျ မနာလိုနကွေပွီ ထငျပါတယျနျော။
ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတ ဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
Source: Sweet Wutt Yi Thaung’s fb
အနုပညာလောကရဲ့ အချောအလှညီအစ်မတွေဖြစ်ကြတဲ့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း၊ အေးဝတ်ရ ည်သောင်းနဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်းတို့ ညီအစ်မကတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ခေတ်ဆိုသလို အနုပညာလောကကို လွှမ်းမိုးနို င်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်းက နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အခြေချနေထိုင်နေတာမို့ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ အလှမ်းဝေး သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အေးဝတ်ရည်သောင်းနဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်းတို့ကတော့ ရန်ကုန်မှာနေထိုင်ပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေကို အရင်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်းက နိုင်ငံတကာက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေ ပိုင်တံခွန်ကို စိတ်ဝင် စားနေကြတဲ့အချိန်မှာ မနာလိုချင်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်အချို့ကိုချပြလာပါတယ်။ ဆွိဝတ်ရ ည်သောင်းက “ကယ်​ရော့! ကိုကြီးတံခွန်နဲ့ maldives ခရီးစဉ်အမှတ်တရ (အ​ရှေ့တောင် အာရှက မမများမ နာလိုဖြစ်ကြကုန် 😜 😜😜 )” ဆိုပြီး မော်ဒိုက်ခရီးစဉ်မှာ ပိုင်တံခွန်နဲ့ ရေစိ မ်နေကြတဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတွေကို သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ချပြလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွိဝတ်ရည်သောင်း၊ အေးဝတ်ရည်သောင်း၊ ပိုင်ဖြိုးသု၊ ပိုင်တံခွန်၊ ကျော်ထက်ဇော်စတဲ့ အနုပညာရှင်တွေက ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနှစ်က မော်ဒိုက်ခရီးစဉ်ကို အတူတကွသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ဆွိဝတ်ရည်ေ သာင်းကတော့ သူမတို့ ခရီးစဉ်က အမှတ်တရအချို့ကို စနောက်ပြီးပြော လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဆွိဝတ်ရည်သောင်းပြောသလိုပဲ အမှန် တကယ် မနာလိုနေကြပြီ ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတ စ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Previous post ယွန်းယွန်းရဲ့မွေးနေ့ အတွက် ခိုင်နှင်းဝေဂေဟာ မှာ Surprise အလှူလေးပြုလု ပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ အောင်မင်းခန့်၊ စည်သူဝင်းနဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
Next post Dancing With The Stars အစီအစဉ်မှာ (၅)မိနစ်လောက်ရိုင်းမိတာနဲ့ အခုအချိန်ထိပြောလို့မပြီးနိုင်ကြတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ မျိုးကိုကိုစန်း